‘संक्रमणदर न्युन गरी नागरिकलाई बचाउन सक्रिय छौँ’ – Mission
‘संक्रमणदर न्युन गरी नागरिकलाई बचाउन सक्रिय छौँ’
प्रकाशित मितिः बुधबार, जेष्ठ ५, २०७८
बाँके जिल्ला सदरमुकाम नेपालगन्ज र एकमात्र नगरपालिका कोहलपुरको बीचमा पर्दछ, जानकी गाउँपालिका । संघीय संरचना लागू भइसकेपछि जिल्लाका ६ गाउँपालिका मध्येको एक हो, जानकी । बाँकेमा अहिले दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस तीव्र रुपमा फैलिरहेको अवस्था छ । जिल्लाका सबै पालिका कोरोनाका कारण निकै प्रभावित भइरहेका छन् । जिल्लाको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका सबैभन्दा बढी कोरोनाका कारण प्रभावित पालिका हो, भने सबै भन्दा कम प्रभावित पालिका जानकी हो । यहाँ अहिलेसम्म एक जना मात्र नागरिकको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ । कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउने महिला हुन् । अहिलेसम्म गाउँपालिकामा २ सय हाराहारीमा कोरोना संक्रमित रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । भने हाल गाउँपालिकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या ९५ जना रहेको छ । अन्य पालिकामा कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेकोले यहाँ पनि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ । वडा नम्बर ६ मा रहेको खुल्ला कारागार क्षेत्रमा आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरिएको छ । यस्तै होम आइसोलेसन सेन्टरमा रहेकाहरुको सुरक्षा, उपचार देखि जनचेतनामुलक कार्यक्रमका साथै गाउँपालिकामा सम्पूर्ण कामकाज समेत भइरहेको छ । बाँकेमा नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिरहेका बेला गाउँपालिकाले गरिरहेका गतिविधिका विषयमा गाउँपालिकाका कोरोना सम्पर्क व्यक्ति तमलाल बेलबासेसँग मिसन टुडे दैनिकका शुभाकर विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
१. जानकी गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि के के गतिविधि गरिरहेको छ ?
अहिले हामी कोरोनाको महामारीको समयमा छौ । विगत एक महिना यता कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर चलिरहेको छ । बाँके जिल्लामा पनि निकै प्रभावित भएको अवस्था छ । यहाँका हरेक पालिका यसैगरी प्रभावित भइरहेका छन् । कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित हुने मध्ये जानकी गाउँपालिका समेत एक हो । त्यसैले हामी सबै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको क्रममा छौ । अहिले हामीले जारी निषेधाको पूर्ण पालनाका लागि सीमा क्षेत्रमा कडाइँ गरेका छौ । छिमेकी पालिकामा कोरोना तीव्र रुपमा फैलिरहेकोले हामीले त्यस्ता सम्भावित क्षेत्रमा कडाइँ गरेका हौँ । यस्तै जनस्तरमा हामीले दैनिक जनचेतना फैलाइरहेका छौ । कोरोनाबाट सुरक्षित रहन अपनाउनु पर्ने विधिदेखि सुरक्षाका उपायसम्म हामीले सिकाइरहेका छौ ।गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यकर्मी समेत परिचालन गरेको अवस्था छ । पछिल्लो समय एन्टिजेन परिक्षण समेत सुरु गरेको छ । पीसीआर परिक्षणका जटिलताबाट सहज रुपमा कोरोना टेष्ट गरेर जनताको जिउधनको सुरक्षाको लागि गाउँपालिकाले एन्टिजेन टेष्ट सुरु गरेको हो । यस्तै हामीले आइसोलेसन सेन्टर समेत स्थापना गरेका छौ । त्यहाँ १४ बेड रहेको छ । अक्सिजनको समेत सुविधा रहेको छ । भने अन्य सामान्य बेड समेत हामीले व्यवस्थापन गरेका छौ ।
२. जानकी गाउँपालिकामा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित, डिस्चार्ज हुने र मृतकको संख्या रहेको छ ?
जिल्लामा आठ स्थानीय तह रहेका छन् । दुई नगर र ६ पालिका मध्ये जानकी गाउँपालिका पनि एक हो । जिल्लाका अन्य पालिका जस्तै जानकी पनि प्रभावित भइरहेको छ । यहाँ दैनिक कोरोना संक्रमित थपिएरहेका अवस्था छ । डिस्चार्ज हुनेहरु पनि बढिरहेका छन् । अहिले सम्म कुल कोरोना संक्रमितको संख्या २ सय २२ पुगेको छ ।हाल सक्रिय संक्रमित ९५ जना रहेका छन् । हाम्रो गाउँपालिकामा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या मात्र एक जना रहेको छ । उहाँ महिला हुनुहुन्छ । कोरोना संक्रमण दर र मृतकको संख्या हेर्ने हो भने जानकीमा थोरै रहेको छ । हामी अन्य पालिका भन्दा कम प्रभावित छौ । कोरोना संक्रमण दर न्युन बनाउन बनाउन लागि परेका छौ ।
३. होम आइसोलेसनमा रहेकाहरुको उपचार कसरी भइरहेको छ ?
सरकारले कोरोनाका सामान्य लक्षण देखिएकाहरुलाई होम आइसोलेसनमा राख्ने नीति बनाएको छ ।सोही अनुसार गम्भीर संक्रमित बाहेक अन्यलाई होम आइसोलेसनमा सुरक्षित रुपमा बस्न आह्वान गरिएको छ । त्यसमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको निगरानी भने आवश्यक देखिन्छ । जानकी गाउँपालिकाले पनि होम आइसोलेसनमा रहेकाहरुको निगरानीका लागि स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेको छ । हामीले गाउँपालिकाका ६ वटै स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेका छौ । उहाँहरु दैनिक कोरोना संक्रमितहरुको उपचारको लागि खटिरहनु भएको छ । उहाँहरुलाई कोरोना फोकल पर्सनका रुपमा तोकिएको छ । दैनिक रुपमा दैनिक फोन मार्फत पनि सेवा दिइरहेका छौ । हामीले प्रत्येक संक्रमितलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री समेत सहयोग गरेका छौ । स्वास्थ्यकर्मी तथा जनप्रतिनिधि उहाँहरुको घरमै गएर सोधपुछ गर्नुहुन्छ । मास्क, सेनिटाइजर, भिटामिन ‘सी’ लगायतका औषधि गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने गरेको छ । दैनिक रुपमा हामीले त्यसरी नै हौसला प्रदान गरिरहेका छौ ।
४. जानकी कोरोनाबाट बढी प्रभावित नेपालगन्ज र कोहलपुरको बीचमा छ, तर गाउँपालिका कम प्रभावित हुनुको कारण के हो ?
तपाईंले सही प्रश्न गर्नुभयो, सिंगो बाँके जिल्ला कोरोनाका कारण प्रभावित छ । त्यसमा पनि नेपालगन्ज त अहिले पनि कोरोनाको हटस्पटका रुपमा रहेको छ । यहाँका घरघरभित्र कोरोना संक्रमित रहेका छन् । मृत्युदर उच्च रहेको छ । कोरोना संक्रमणदर भयावह छ । मलाई लाग्छ, त्यहाँको घना आवधी र जनसंख्या पनि एउटा कारण हुन सक्छ । त्यसैगरी कोहलपुर नगरपालिका पनि प्रभावित भइरहेको अवस्था छ । त्यो हिसाबले हेर्दा दुई प्रभावित पालिकाको रुपमा रहेको जानकी कम प्रभावित छ । मेरो विचारमा यहाँ कम कोरोना संक्रमित देखिनुको एउटा कारण कम परिक्षण हो । राज्यले पनि बढी प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । त्यसैले पनि कम प्रभावित क्षेत्र प्राथमिकतामा छैनन् । त्यसमा स्थानीय तहको सक्रियताको सवाल जोडिएको छ । हामीले हाम्रो स्रोत र साधनको अधिकतम उपभोग मार्फत अन्य गतिविधि गरिरहेका छौ । पीसीआर परिक्षणको लागि जटिल नै छ । अहिले हामीले एन्टिजेन परिक्षण सुरु गरेका छौ । अर्कोकुरा कोरोनाका कारण होम आइसोलेसनमा रहेकाहरु सहि किसिमले गम्भीरताका साथ कोरोनालाई लिएर संयम भएका कारण पनि कम भएको हो । त्यसैले कोरोनाको फैलावट कम भएको भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ । अनि जिल्लामा चार हप्तादेखि लगातार निषेधाज्ञा छ । हामीले पनि स्वीकार गरेर पालना गरिरहेको अवस्था हो । शैक्षिक संस्था देखि अन्य कामकाज समेत बन्द अवस्थामा छन् । पसलहरु समेत बन्द अवस्थामा रहेका छन् । सार्वजनिक क्षेत्रमा भीडभाड हुन नदिन हामीले विशेष सुरक्षा अपनाएका छौ । सामाजिक दुरी कायम गरिरहेका छौ ।
५. गाउँपालिका स्तरमा हुने विकास निर्माणका काम सञ्चालन भइरहेका छन् ?
मैले तपाईंलाई भने, जानकी गाउँपालिका अन्य पालिका भन्दा कम प्रभावित छ । हामीले थप प्रभावित हुन नदिनको लागि प्रभावित नहोस भन्नको लागि विशेष सावधानी अपनाएका छौ । गाउँपालिकाले विशेष महत्वका योजना समेत सञ्चालन गरिरहेको छ । सामाजिक दुरी कायम गर्दै, स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सम्पूर्ण काम भइरहेको छ । अझै पनि स्थानीय स्तरमा कोरोना गम्भीर हो भन्ने भान चाहीँ भएको छ । कोरोनाबाट बच्न र बचाउनको लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छौ । गाउँपालिकाले पर्चा, पम्पलेटदेखि सामाजिक सञ्चालन र मिडिया मार्फत पनि सावधानीको लागि अपिल गरिरहेको छ । अर्कोतिर देशभर र जिल्लाभर कोरोनाको संक्रमण बढेपछि संयमित भएको देखिएको छ । जस्तो बाहिर निस्कदा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नुहुन्छ । सेनिटाइजर समेत बोकेको हिडेको देखिन्छ । स्वास्थ्य संस्थामा आउने बिरामीहरुलाई मास्क वितरण तथा हात धुने, भौतिक दुरी कायम गर्न पनि भनिएको छ । संक्रमित व्यक्तिको सुरक्षा र छुट्टै आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तै कोरोना संक्रमित विरामी भएमा वा गम्भीर अवस्थामा पुगेमा उनीहरुको उद्धारको लागि एम्बुलेन्सको समेत व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नै एम्बुलेन्स नभएपनि व्यवस्थापन गरिरहेका छौ । त्यो एम्बुलेन्सले २४ घण्टा सेवा दिन्छ । यस्तै हामीलाई विभिन्न तह र तप्काबाट सहयोग पनि जुटिरहेको छ । केही संघ संस्थाहरुले स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्नु भएको छ ।
६. अन्त्यमा, सम्पूर्ण गाउँपालिकाबासीहरुलाई कोरोनाबाट सुरक्षित रहनको लागि के भन्नुहुन्छ ?
पक्कै पनि कोरोना संक्रमणको अवस्था छ । यो निकै जटिल अवस्था हा । यस्तो अवस्थाबाट आफै सुरक्षित हुनु नै अहिलेको लागि बुद्धिमान हो । सिंगो विश्वले महामारीको सामना गरिरहेको छ । हाम्रो देश नेपालले समेत अभूतपूर्व महामारीको सामना गरिरहेको छ । बाँके पनि यसको चपेटामा छ । देशभरमा रेडजोनमा छ । संक्रमणदर र मृत्युदर बढिरहेको छ । हामीले यसको सामना गरिरहेका छौ । सम्पूर्णलाईए मेरो आग्रह अनिवार्य मास्क प्रयोग गरौँ, सेनिटाइजर प्रयोग गर्न नभुलौँ । भौतिक दुरी कायम गरौँ । सकभर अत्यावश्यक नभई घरभित्रै बसौँ । सुरक्षित बनौँ । कोरोनालाई परास्त गर्न सबै मिलौँ ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, जेष्ठ ५, २०७८ 8:49:02 AM |
Prevदेशभर थपिए ८,२०३ संक्रमित
Nextबिहानै लमजुङ केन्द्रबिन्दु बनाएर ५.८ म्याग्नेच्युडको भूकम्प